Sambaloolshe oo wacad ku maray inay Ilko tiri doonaan kuwa Awoodda is biday Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Sambaloolshe oo wacad ku maray inay Ilko tiri doonaan kuwa Awoodda is biday Muqdisho.
By HornAfrik	 On Jun 10, 2017
Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa sheegay in aan cidna loogu turi doono howlaha lagu xasilinayo magaalada Muqdisho, isagoo ka digay in la siyaasadeeyo ama qabiil loo bedelo howlaha socda.
Dagaaloka socda Shabeeladda Hoose.
Hub iyo Qaraxyo lagu soo qabtay Degmadda Waabari.